Muxuu afkaaga uu soo shiiraa subixii – arrimahan ayaa xal u ah!
Home Hoyga Nolosha Muxuu afkaaga u soo shiiraa subixii – arrimahan ayaa xal u ah!
Muxuu afkaaga u soo shiiraa subixii – arrimahan ayaa xal u ah!
Maxaan ula soo toosaa afkeyga oo shiir kulul leh? Xalka muxuu yahay? Hoos ka akhriso jawaabta.
afka soo shiira subixii dawo ma leeyahay? Haa - UNSPLASH
Ma ahan arrin lagu farxo in subax kasta aad soo toosto afkaaga oo soo shiiraya (“uraya”). Balse waa arrin ay dad badan kula wadaagaan – haddaba ha walwalin.
Dadka into badan mar uun ayey isku arkaan afka oo soo shiira subixii. Su’aashu waxay tahay, Maxaa sababa, mana la daweyn karaa? – HAA.
Waxaa jiro dhowr arrimood oo sabab in subixii uu afka soo shiiro – balse labada arrimood ee ugu waaweyn waa afka oo qalalan iyo in qofka uusan si wanaagsan u cadeyan:
Haddii aad tahay qof si wanaagsan u cadeyda, welina afka shiirkiisa uu ku dhibayo subixii, haddana waxay u badan tahay in habeenkii uu afkaaga qalalo.
Candhuufta waxay habeenkii masuul ka tahay in afka ay ka saarto jeermiska xun ee sababa af-urka.
Haddaba xilliga hurdada, candhuufta way yaraataa. Dadka ay ka wada dhammaato ee afkoodu qalalo, waxay soo toosaan afkii uu shiiraya.
Sidoo kale waxaa jiro dawooyiin sababa af-urka.
Cadey la’aanta iyo nadaafad xumada
In qofka uusan si wanaagsan u cadeyan waa sababta kale ee keenta afka oo soo ura subixii. Afka waa meesha ay ka quutaan jeermisyada qaar.
Haddii aadan si wanaagsan aadan u cadeyan, cuntada ku harta ee dhexgashada ilkaha iyo luuqyada carabka, waxay sababaan ur – qaarkood ur aad u xun.
Jeermiska afka ku jira ayaa dhexgalaya cuntadaas iyo ciridka, ka dibna isku milankaas wuxuu dhaliyaa urka – xitaa marka aad xoogaa aamusnaato, waa isku arki kartaa shiir aan lo dulqaadan Karin.
Cadey la’aanta waxay sidoo kale sababtaa cuduro afka ku dhaca iyo ilkaha oo jajaba, cirdka oo dhammaada iyo afka oo boogo badan yeesho.#
Mararka qaar, xanuunadaas way adag tahay in la daweeyo – haddaba si fiican u cadeyo.
Cunidda raashiinka qaar
Waxa aad jidhkaaga gelineyso waxay sababi karaan af-urka subixii.
In habeenkii, inta aadan seexan ka hor, aad cunto raashiinka urta kulul leh, sida toonta, yaanyo caydhiin ah iyo kuwa la midka ah, waxay sababi karaan afka oo soo shiira subixii. Xitaa haddii aad cadeyato, waa suuragal in shiirkaas uusan bixin.
Tubaakada ama sigaarka
Isticmaalka sigaarka ama tubaakada ayaa sidoo kale sababa af-urka. Sidoo kale waxay sababi karaan afka oo iska soo shiira xilli kasta.
Dhammaan maandooriyeyaasha waxay sababaan af-qalal taas oo dhalineysa in urta-afka ka soo bexeysay ay saa’id noqoto.
Dadka qaba xanuunka gaaska – gastrointestinal reflux (GERD) — ama dadka qaar ay u garanayaan laab-jeex, waxaa suuragal ah in afkoodu soo shiiro subixii.
Sababtu waxay tahay in waxa caloosha ka hurinaya oo dib u soo celiya cuntada, ka dibna sababa shiir.
Inta badan af-urka subixii waa la daweyn karaa – waxaa ka mid ah adigoo guriga joogo balse nadaafadda ku dadaala iyo in aad bedesho habka aad u nooshahay.
In aad badiso cadeyga waa xalka ugu wanaagsan uguna waqtiga dheer ee aad uga hortagi karto afka uraya subixii. Waxaad cadeyankartaa subixii iyo habeenkii ka hor inta aadan seexan. Halmar oo maalintii ahna in aad ku darto way wanaagsan tahay.
In aad sidaa sameyso waxay caawineysaa in raashiinka afka ku haray uu bannaanka u soo baxo. Sidoo kale si wanaagsan u luqluqo.
Haddii aad tahay qof balwad leh, sida sigaarka iyo tubaakada – si degdeg ah waa in aad u joojisaa.
Xanjada aan sokorta lahayd isticmaalkeeda na wuu kaa caawin karaa, waa haddii aad tahay qof muddo ka dib ba mar uu afkiisa soo shiiro.
Hana illaawin in dhaqtarkaaga aad weydiisato daweyn xal wayn u noqon karta arrintaas – sida nadiifinta ciridka, ilkaha iyo buuxinta meelaha bannaan ee cuntada ay geli karto.
Arrimaha qaar waxay u baahanayaan in qalliin lagu sameeyo six al waara loogu helo – taa waxaad kaga badbaadi kartaa in inta aysan xaaladda xumaan aad cadeyga joogteyso.
Dadka qaba xanuunka gaaska, dhaqtarkaaga weydiiso in uu ku siiyo dawo yareyneysa in habeenkii uu gaas kugu kaco oo cuntadii ay dib kugu soo guddoonto.
Sidoo kale waxaa dadka qaar lagula taliyaa in ay si toosan oo kor ah u seedxaan, barkintana dheereystaan, si looga hortago in cuntada soo gadoonto oo sababto calool hur.
Sida looga hortagi karo af-urka subixii
Intaan loo baahan daweyn, waxaa wanaagsan in marka horeba aad ka hortagto arrintaas.
Waxa aad cuneyso iyo wixii afkaaga galaya waa muhiim:
Biyo badan cab maalintii, sidoo kale inta aadan seexan habeenkii biyo cab. Taa waxay kaa caawineysaa in afka uusan ku qalali, wayna ka hortageysaa af-shiirka subixii.
Ka fogow cuntada shiirka kulul leh in aad habeenkii cunto – sida toonta, yaanyada iyo kafeega xitaa, mar haddii galab ay noqoto. Cuntada caafimaadka leh ee isu dheellitiran waa midda ugu wanaagsan ee caafimaadka guud iyo carafta afka ee subixii.
Iska daa maandooriyeyaasha, waxay ahaadaanba – Khaad, shiishad, tubaak ama sigaar iyo taabuu – dhammaan jooji.
Previous article5-ta Qoys ee ugu awoodda badan caalamka, dunidana maamula
Next articleFaa’iidooyinka shaaha bigeyska ah: Mar dambe ma cabi doontid caddeys